Autograph | Ram Chandra Upreti | There isastar in everyone. | Suvadin !
First Name : Ram Chandra Upreti
Address : Mechi Nepal
Email : ramchandraupreti75@gmail.com
Phone : +977 9852672700
Published Post By Ram Chandra Upreti
स्तर उन्नतिको सकस
रामचन्द्र उप्रेती समाज विकासका प्रकृयाहरु बढो जटिल हुँदा रहेछन्। समाज कार्लमार्क्सले परिकल्पना गरे अनुसार वर्ग विहिन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। समाज रहेसम्म वर्गहरु रहन्छन्। वर्ग आर्थिक कारणले मात्रै स्थापित हुने होइन रहेछ। राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक शक्ति प्रयोग गर्नेहरु पनि समाजको उपल्लो वर्गमा पर...
के समाजमा अपराध मनोवृत्ति बढेकै हो?
रामचन्द्र उप्रेती नेपाली समाजमा विभेद (जातीय, लैंगिक) बढेको हो? अपराध त्यो पनि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध र महिला हिंसामा बृद्धि भएकै हो? यो बारेमा अलिकति छलफल हुन जरुरी छ। कञ्चनपुरकी बालिका १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या र त्यसमा राज्यका जिम्मेवार निकायले गरेको लापरबाहीको घटना...
रामचन्द्र उप्रेती कुनै समय थियो घरमा जे पाक्छ त्यही खायो। तर अहिले समयले हामीलाई घरको खानामा सीमित गरेको छैन। उहिले घरमा जे पकाइन्थ्यो त्यो प्रायः आफ्नै खेतबारी, भीरपाखा, खोलाखोल्सी र गोठको हुने गर्थ्यो। मिठोमसिनो खान चाडवाड पर्खनुपर्थ्यो। त्यो पनि सबैलाई सहजै जुर्ने कुरै भएन। बजारमा किनेर खाने...
फरक–फरक दृष्टि, फरक–फरक कर्म
रामचन्द्र उप्रेती केही वर्ष पहिलेको कुरा हो मेरी एकजना आफन्त फुपूदिदीले एकाबिहानै घरैमा आएर सहयोग माग्नु भयो। उहाँ उमेरले अलि पाको, झण्डै ७० वर्ष जति हुनुपर्छ। एकल महिला, उहाँका छोराछोरी छन्। मध्यम वर्गीय परिवार। सबैको अवस्था र व्यवस्था राम्रै छ। तर पनि दिदी एक्लै बस्नुहुन्छ। आफैँ खानुहुन्छ । आ...
मन्त्रीज्यू, सरकार प्रचारमुखी होइन, परिणाममुखी हुनुपर्छ
रामचन्द्र उप्रेती अहिले संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवले अख्तियार गरेको कार्यशैलीको चर्चा सञ्चार माध्ययममा व्यापक बनेको छ। यो लेखमा गृहमन्त्रीले निर्माण कम्पनीका ठेकेदार जसले समयमा काम सकेनन्, काम गरेनन् तिनको सूची तयार ग...
जो बढी धर्मात्मा त्यही बढी संकटमा किन?
रामचन्द्र उप्रेती धर्म के हो? केलाई धर्म मान्ने? के गर्दा धर्म हुन्छ? धर्म किन गर्ने? धर्मको परिभाषा के हो? यस्ता विषयमा अनन्त बहस भएको छ, हुन्छ र भइरहन्छ। म बहस गर्ने र रौं चिरा छलफल गरेर अर्थ लगाउनेभन्दा धर्म र धार्मिक विषयमा समाजमा रहेको साधारण बुझाई जे छ त्यसैका आधारमा केही चर्चा गर्न प्रया...
कसरी निर्माण हुन्छन् मानिसका जरा?
रामचन्द्र उप्रेती मानिसका जरा हुन्छन् भन्दा पत्याउन नसकिएला। तर, मैले महशुस गरें कि, मानिसका जरा हुँदा रहेछन्। मानिस सामाजिक प्राणी भएका कारण उसका जरा समाजमा हुँदा रहेछन्। रुख बिरुवाका जरा तिनैसँग जोडिएर माटामा फैलिएका हुन्छन् भने मानिसका जरा पनि मानिससँगै जोडिएर समाजमा गाडिएका हुँदा रहेछन्।...
गल्ती जहाँबाट भयो सच्याउन त्यहीँबाट शुरु गरौं
रामचन्द्र उप्रेती नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यतिखेर सर्वत्र चर्चाको पात्र बनेका छन्। चर्चा उनको कर्म अर्थात कामको कारण हुने गरेको छ। उनले गर्ने काम उनको सोच, मूल्य र दृष्टिको उपज हुन्। हुन त उनी लगभग सधै नै चर्चाको पात्र बनिरहे। शाही शासन कालमा, नेपाली कांग्रेसको विभाजनको समयमा, स...
सफल कसरी हुने ?
रामचन्द्र उप्रेती सफल हुने इच्छा कसलाई हुँदैन र? तपाईलाई पनि त सफल हुने इच्छा छ, होइन र? केमा सफल हुने भन्नुहोला। तपाई जेमा सफल हुन चाहनुहुन्छ त्यसैमा। विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदुर, पत्रकार, लेखक, खेलाडी, गृहिणी, वकिल, डाक्टर, राजनीतिज्ञ, नेता, नीजि व्यवसायी आदि आदि। मान...
कसरी बन्छन् मानिसमा धारणाहरु ?
रामचन्द्र उप्रेती यो खानु हुन्छ। त्यो खानु हुँदैन। यो राम्रो छ त्यो नराम्रो छ। त्यो मानिस राम्रो छ, यो मानिस खराब छ। यो जनावर राम्रो हुन्छ। त्यो जनावर राम्रो छैन आदि आदि। राम्रो–नराम्रो, असल–खराब, ठिक-बेठिक, उचित-अनुचित, माया लाग्दो, डर लाग्दो, सुरुचि अरुचि यी सबै एक अर्कामा विपर...
लुटतन्त्र संस्थागत गर्ने कि राजनीतिक पद्धति सुधार्ने ?
रामचन्द्र उप्रेती नेपालमा स्थापित दलहरुले चुनावमा राजनीतिक धर्म पालन गर्नेभन्दा चुनाव जित्न सक्नेलाई टिकट दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर २ मा उम्मेदवार छान्ने क्रममा राजनीतिक निष्ठा भन्ने कुराको कुनै दलले कतै पालना गरेको देखिएन भनेर खुबै आलोचना भएको छ। हुनपनि राजनीति...
उद्यमशीलताकाे विकास गराैं, स्वदेशमै छन् प्रशस्त सम्भावना
रामचन्द्र उप्रेती नेपालीहरु स्वदेशमा काम नपाएर दैनिक १५ सयभन्दा बढी जहाज चडेर कामको खोजीमा विदेश जान्छन्। गुडेर र हिँडेर भारतको भूमिमा कामको खातिर पुग्नेको गन्ती हुने गरेको छैन। नेपालले बर्षेनि ६ खर्ब जति रकम विप्रेषणको रुपमा भित्र्याउने गरेको छ। यस्तो रकमको बृद्धिदर घटेकोमा धेरैलाई चिन...
Published Events By Ram Chandra Upreti
Published Infos By Ram Chandra Upreti
Published Polls By Ram Chandra Upreti